INgqungquthela yoNyaka ye-IWCA ka-2021 (nge-Okthobha 20 ukuya ku-23) -Umbutho wamaZiko aBhalayo weHlabathi
Qhagamshela kwi live website inkomfa uhlaziyo kunye nolwazi lwenkomfa. Jonga i-ajenda yenkomfa Sikunye kwakhona ngaphandle: Ukucinga kwakhona ngokuHlala kwethu
Ubhaliso ngoku luvaliwe.
Sikunye kwakhona ngaphandle: Ukucinga kwakhona ngokuHlala kwethu
Amalungu oMbutho weZiko lokuBhala wamazwe aphuma kumazwe aphesheya kweelwandlekazi kunye neelwandlekazi, kwaye siyakuxabisa ukwahluka njengenye yamandla ombutho wethu. Sidityanisiwe yile nto sabelana ngayo njengendawo yokusebenza yoluntu jikelele, oko u-Etienne noBeverly Wenger-Trayner (ngo-2015) bakuchaza njengoluntu "olunolwazi oluchazwe kwindawo ekwabelwana ngayo enomdla." Kithina, ubulungu buthetha "ukuzibophelela kwidomeyini, kunye… nobuchule ekwabelwana ngabo obwahlula amalungu kwabanye abantu" (E. & B. Wenger-Trayner, 2015). Kwangelo xesha, njengombutho wabantu, sikwangoluntu oluninzi lwezinto ezithi zenzeke, zidibane, kwaye, ngamanye amaxesha, zenze izinto zonakalise njengoko sithetha-thethana ngamaxabiso kunye namava oluntu olunye lokuziqhelanisa ngelixa sinxibelelana nolunye (Wengner- Itreyi, 2015). Nangona kunjalo, kukungafani kwendawo yethu nganye enika ubutyebi bamava esinokufunda kuwo kunye nokukhula. Ukuba ikhona into, unyaka ophelileyo uphakamise ingqalelo yethu kungekuphela koko sabelana ngako njengenxalenye yeziko lokubhala, kodwa nakwindlela izinto zethu kunye nezikhundla zethu ezichaphazeleka ngayo bubulungu bethu kolunye uluntu ekuhlaleni-uninzi lwazo lusisiseko ekuhlaleni, ezixekweni nakumazwe esihlala kuwo; amaziko esisebenza kuwo; kunye neemeko zentlalo nezembali ezihambelanayo.
Uphengululo olunqongopheleyo loshicilelo lwangoku kunye neenkomfa ezivela kwimibutho yabantakwethu zikhomba kwimiceli mngeni thina-abafundisi-ntsapho, ootitshala, abafundi, abalawuli-esiye sathetha-thethana nalo kulo nyaka uphelileyo. Ukuba kukho nantoni na, ubhubhane, unyuse ulwazi malunga nembali kunye nokuqhubeka kusengelwa phantsi kunye nokususwa kulwaphulo-mthetho amaqela aseluntwini aqhubekeka ukujongana nawo-kwaye neendlela ezininzi olu dushe / ukuvala umlomo kwenzeka kwiindawo ezahlukeneyo. Kwindibano yalo nyaka ka-Okthobha, sifuna ukwazisa imiceli mngeni abajamelene nayo abahlali beziko lethu lokubhala-ubhubhane oqhubekayo wehlabathi; uhlaselo oluqhubekayo kwidemokhrasi eMyanmar, eHong Kong nase-US; ukwanda kolwaphulo-mthetho olunentiyo nezidubedube zobuhlanga; ukonakala okungapheliyo kwiplanethi yethu- kwaye ujonge indlela esiziphawule ngayo iitalente zethu zokuphendula.
Kulo nyaka uphelileyo, siye sabona abantu kunye namaqela kuwo onke amalungu ethu-amele amaziko avela eMzantsi naseMntla Melika, eYurophu, eMbindi Mpuma, e-Afrika nase-Asiya- asabela kule mingeni ngeendlela zokuba noxanduva zonke ababhali abatyelela amaziko ethu kunye zonke abantu abasebenza kuzo. Ngelixa uninzi lwezi nzame lusekwe kwiindlela zokwazi kwaye zibotshelelwe kwindawo yethu yokubhala, sikwabonisa imibono eyahlukileyo ethathwe ekuthembekeni okungaphaya kuluntu lwasekhaya, inyani etyebisa kwaye idibanisa umsebenzi wethu ngeendlela ezingalindelwanga. Lo msebenzi ufuna ukuba siphinde siqinisekise kwaye siphinde simise ixabiso lethu, ukuba sibambeke kwindawo engathandekiyo ngamanye amaxesha phakathi kokuzichaza ukuba singoobani kwaye senza ukuba singobani, kwaye siphinde siqwalasele iindlela zethu zokumisela indlela nokuba bayayiphendula njani imeko yethu yangoku.
Ngelixa uninzi lwethu luchithe unyaka ophelileyo ngokwasemzimbeni ngaphandle kweentsapho zethu, abantu esisebenza nabo, kunye noluntu, sakha sahlanganisana. Ubuchule kunye nobuchule zibambe njengoko besicinga ezinye iindlela zokuba kunye. Sibonile iinzame zokuphendula kulo mzuzu we-kairotic kupapasho, iifowuni zenkomfa, iingxelo zobume, umkhondo wophando, kunye nobambiswano olwenzekayo. Kwaye ngamabali emingeni yethu kunye neempendulo, uphando lwethu kunye namanyathelo-amaxesha apho saphakama sijamelene nokuphelelwa lithemba okukhulu-esifuna ukubhiyozela kule nkomfa. Njengokuba sihlangana, nangona sisahlukene ngokwasemzimbeni, sifuna ukwamkela, ukuphonononga, kunye nokubhiyozela ukuba siqhubeka nokuzicingela njani njengoluntu olunamandla, olunobuchule, olubonakalisayo nolubonakalisa izinto esizenzayo.
Izindululo zinokuphefumlelwa (kodwa azikhawulelwanga) kule misonto ilandelayo:
Yeyiphi imiceli mngeni iziko lakho elijongene nayo kulo nyaka uphelileyo kwaye uphendule njani? Uthathe kweyiphi indawo yokuziqhelanisa nokuchonga imiba kunye neendlela zokuphendula?
Iziganeko zonyaka ophelileyo zichaphazele njani isazisi sakho njengengcali yeziko lokubhala? Bachaphazele njani ubume beziko lakho?
Ngaba iziko lakho lithetha njani ngobulungisa bezentlalo / iinkxalabo zokubandakanya? Ngaba iimeko ezibonakalayo zonyaka ophelileyo ziwuchaphazele njani lo msebenzi? Ngaba lo msebenzi usekwe ikakhulu kwiziganeko zalapha ekhaya okanye zehlabathi?
Zeziphi iimeko ezingxamisekileyo zasekhaya ezintsonkothileyo kwimiceli mngeni kwiziko lokubhala? Ngaba izibonelelo zasekhaya zikuncedile ekuphenduleni kule mingeni, okanye ngaba uluntu olwenziweyo lwehlabathi likuxhasile?
Ukuhamba kwi-intanethi kube nefuthe njani kwindlela abahlali abasebenza ngayo kunye nakwindawo zehlabathi ezenziwa ngayo?
Ngawaphi amaxabiso eziko lokubhala asisiseko kunye / okanye imixholo ehleli entliziyweni yakho yokwenza? Uye wabaguqula njani ukuze baphendule ngcono / kwimeko yakho?
Zeziphi iimbono, ukuba zikhona, ezinokuphambuka ekuhlaleni ezinikezelwe ngokweengcinga zezona ndlela zibalaseleyo, uqeqesho lwabasebenzi, amathuba ophando, okanye ukusebenzisana kwiindawo zonke?
Ulukhuthaze okanye ulugcine njani unxibelelwano nabasebenzi bakho, iFakhalthi kunye nabafundi? Umsebenzi we-Intanethi unokwenza njani ukuba olu nxibelelwano lufikeleleke ngakumbi kwabanye abakhutshelwe ngaphandle?
Kuya kufuneka ukuba uhlengahlengise iindlela zokuvavanya ukumela umsebenzi wakho njengoko uye kwi-intanethi?
Zeziphi iindlela ezintsha zophando ezivele kwiimeko eziguqukayo zezinto zokusebenza kulo nyaka uphelileyo?
Njengokuba silindele ukubuyela “kwesiqhelo,” zeziphi iindlela ezintsha ofuna ukuzigcina kwaye zeziphi iindlela ofuna ukuzishiya?
INkomfa ye-IWCA yowama-2021 iya kubanjelwa kwi-Intanethi ngeveki ka-Okthobha u-18 kwaye izakubonisa iifomathi ezahlukeneyo zokubonisa. Abathathi-nxaxheba banokuphakamisa enye yezi ndlela zilandelayo zokubonisa:
Inkcazo yePhaneli: 3 ukuya kwi-4 intetho ye-15-20 yemizuzu nganye kumxholo othile okanye umbuzo.
Inkcazo-ntetho yomntu ngamnye: Ingcaciso-ntetho eli-15 ukuya kwengama-20 (eya kudityaniswa ibe yipaneli ngusihlalo wenkqubo).
Iworkshop: Iseshoni yokuthatha inxaxheba ebandakanya abo bafundayo.
Ingxoxo ejikelezayo: Imizuzu eli-15 yokwazisa ngentloko yinkokeli, zilandelwa yingxoxo eququzelelweyo phakathi kwabahambi.
AmaQela aKhethekileyo: Iincoko ezinobuchule ezikhokelwa ngoogxa abanomdla ofanayo, useto lweziko, okanye izazisi.
Ungayihoyi iPrezishini: Inkcazo yemizuzu emi-5 equlathe imifanekiso engama-20 imizuzwana nganye eli-15
Umyalezo wephowusta: Umboniso wophando olungileyo-apho umbonisi (a) enze ipowusta emise ingxoxo yabo nabazimasa.
Umsebenzi-ekuqhubekekeni: Iingxoxo ezijikelezayo apho abenzi ntetho ngokufutshane (imizuzu emi-5 ukuya kweli-10) baxoxa enye yeeprojekthi zophando zeziko lokubhala (emva koko) ze bafumane ingxelo.
Ngelixa iPhaneli kunye noMntu ngamnye esaza kubandakanywa, kulo nyaka iintlobo ezahlukeneyo zeeseshoni ziya kumelwa ngokulinganayo. Izindululo zibangelwe ngu-Juni 4, 2021 ngo-11: 59 pm HST (abantu abaninzi baya kufumana ixesha elongezelelekileyo, ngaphandle kokuba useHawaii! :)
Yiya kwiwebhusayithi ye-IWCA (www.writingcenters.org) ngolwazi lwenkomfa nakwi-portal yamalungu (https://www.iwcamembers.orgUkungena kunye nokungenisa isicelo. Nxibelelana noGqirha Georganne Nordstrom (georgann@hawaii.edu) ngalo naluphi na ulwazi olongezelelweyo.
UWenger-Itreyi, uE & B. (2015). Intshayelelo kuluntu lokuziqhelanisa: Isishwankathelo esifutshane somxholo kunye nokusetyenziswa kwawo. Wenger-Trayner.com.
Xa ufuna ukushicilela uguqulelo olunobuhlobo, cofa apha 2021 CFP: Ndawonye kwakhona ngaphandle.